MUXAADAROOYINKA DIINIGA A !!!.
Gacmo isku salaan ragya dumar.
Qur'aanka & fadligiisa.
Masaafada & qudbo sirada.
Xanta iyo xumaanteeda.
Maxaa loo aqbi la'yahay ducadeenna?
Qoom aan is dulleyn alle ma dulleeyo.
Waano guud iyo xaalkeenna maanta.
Fadliga Muxarram iyo caashguuraa.
Soonka & waxyaabaha jebiya.
Shawaal & sida loo soomo.
Habeenka laylatul qadriga.
Ciidda & waxa la iska rabo.
Miyaad warba u haysaa fadliga ay leeyihiin maalmaha tobanka ah ee u horreeya bisha xajka ee DUL-XIJJAH, bal walaal nala faa'iideyso oo RIIX HALKAN.
Weli ma is weydiisey waxa ay diinteenna islaamku ka qabto, in rag iyo dumar kala ajnabi ah ama aan maxram isu ahayni ay si toos ah gacmaha isugu salaamaan, maxayse ku kala duwantahay in ay toos isu salaamaan ama ay maro ama shey kale iska xigaan jirkooda, haddaba si aad uga bogato dhammaan su'aalahaas Riix Halkaan.
Qur'aanku waa kalaamka ilaaha weyn ee na abuurtay, sidaa darteed waxa uu ka hadlaa akhbaarihii hore ee ummadihii naga horreeyey ilaa maalintii adduunyada la abuuray, wuxuu kaloo noo caddeeyaa waxa aan dhexdeenna isku xukumayno maanta ilaa qiyaame, wuxuu kaloo nooga sii warramaa wax alla waxa iman doonaa ilaa qiyaame, janno iyo naar, ee ka bogo oo Riix Halkan.
Haddaannu nahay ummadda soomaaliyeed waxaan caadooyinkeenna ka mid ah Masaafada, taas oo marar badan dhalisa muran joogta ah oo dhex marta caammo iyo culummo, haddaba si aan lagaaga sheekeynba akhriso oo Riix Halkaan.
Xantu waxa ay ka mid tahay dembiyada waaweyn ee kabaa'irta ah, kuwaas oo ah kuwo naarta jahannamo si toos ah loogu gal haddii aan laga tawbad keenin, haddaba waxaannu wada ognahay in maanta iska daa kuwa aan diin haysane, kuwa diinta islaamka in ay haystaan sheegta in aanay intooda badani xantu uga duwanayn koob biyo ah oo la cabayo, haddaba bal si aad u ogaato, haddii aad ogaydna ugu baraarugto dhibaatada xad dhaafka ah ee ay xantu leedahay Riix Halkaan.
sida aannu wada ognahay ilaahey subxaanahu wa tacaalaa wuxuu yiri i barya waan idinka ajiibiye, waxanna wada ognahay in ilaahey uu ballankiisa sida uu u yiri u fulinayo, waxa kale oo aannu ognahay in aannu maalin walba salaad tukanayno ilaaheyna baryeyno, haddana iyada oo xaalku sidaasi yahay ayaannu ognahay in aan wax nalaga aqbalay jirin oo aanu mar walba dhibaato ku jirno, haddaba si aad u ogaato halka ay sartu ka quruntay Riix Halkaan.
Waxa uu ilaahey qur'aankiisa noogu sheegay in aanuu dullayn qoom aan iyagu marka hore la imaan sababtii lugu dulleyn lahaa, iyada oo looga digey, loona soo diray rasuul u sheega in haddii ay wanaagga raacaanna ay liibaanayaan, haddii ay xumaha qaataanna ay dulloobayaan, haddaba bal si fiican uga bogo oo Riix Halkan.
Tirada arkaanta salaadda! 14-03-2010.
Janaabada iyo qubayskeeda! 14-03-2010.
Dawo madoobaysadu ma bannaantahay? 14-03-2010.
Shuruudaha salaadda, 14-03-2010.
Fadliga salaadda Q-2, 01-03-2010.
Fadliga salaadda Q-1, 23-02-2010.
Qof salaadda saf dambe kuugu soo jiidaya 20-02-2010.
4 Su'aal oo Xaylka iyo qubayskiisa ah 20-02-2010.
Xaaskaagu ma kaa jebisaa weysada?
Baqti yaa nasiibku ma xalaal baa mise xaaraan?
Sidee baan uga faa'iideysan karnaa bisha Ramadaan?
Nikaaxa beenbeenta ah & diinta.
Dembi weyn hadduu iga dhaco maxaan sameeyaa?
Qunuutka & xukunkiisa.
Salaadda jimcuhu ma ku ansaxdaa 40 qof?
Furriinka qasabka ah & xukunkiisa.
Hooyada uurka leh & soonka?
Dhalmo fogayn biyaha dibedda ma ugu daadin karaa?
Sidee looga qubaystaa xaylka, nifaaska & janaabada?
Fadliga 10 ka beri ee bisha xajka u horraysa?
Maxaad ka taqaan abtiriskii nabiga SCW?
Maxay diintu ka qabtaa waxyaabaha dumarku isku qurxiyo?
Subpages (1): Shir loo dhanyahay nin ka kacay siigo yare !!!